Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Fantatrao ve fa misy Aussie Outpost any Munich?
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovao Mafana Alemana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ferris Wheel sy Adina Munich Hotel - Sary © Elisabeth Lang
Efa ho roapolo taona lasa izay, ny distrikan'ny famonosana hena any New York dia nivadika ho toerana manara-penitra sy mavitrika miaraka amin'ireo mpamorona lamaody toa an'i Stella McCarthy nanokatra ny trano fivarotana voalohany tao New York ary lasa mpanazatra.
Raha tany amin'ny faran'ny atsinanan'i London, Shoreditch ary indray mandeha ny toerana ho an'ny famonoana malaza nataon'i Jack the Ripper, dia nivadika ho renivohitr'i Londres.
Amin'izao fotoana izao, ity dia faritra an-tanàn-dehibe misy trano fisakafoanana manara-penitra sy zava-kanto an-dalambe, trano fisotroana, trano fisotroana kafe ary trano fisotroana kafe manamorona ny arabe.
Ary ankehitriny dia misy ny ilany atsinanan'i Munich vaovao hahitana sy hialana amin'ny lapan'ny tanàna taloha sy ny tanànan'i Munich taloha.
Ny fampandrosoana an'i Munich Atsinanana dia nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona sivy ambin'ny folo tao amin'ny fitambaran'ny orinasa mpamokatra ovy goavambe (Pfanni) any Alemaina, izay hita ao ambadiky ny Munich Ostbahnhof. Pfanni dia namokatra poti-potan'i Alemaina, puree ovy, sns., ary dumplings ovy be dia be, manondrana izany manerana an'i Eoropa. Nakatona ny orinasa tamin'ny 1996 ary nifindra tany ivelan'i Munich. Navadika ho Kunstpark Ost (Art Parc East) ny faritra manontolo, ary lasa faritra faran'izay fety amin'ny alina ilay faritra manontolo.
Miaraka amin'ny fiovana lehibe sy ny fivoarana goavana, ny Munich Eastside (antsoina hoe Werksviertel) no toerana tokony hisy ankehitriny (hijery) ary safidy tsara ho an'ny mpihinana sakafo sy craft labiera mpankafy, miaraka amin'ny trano fisakafoanana, trano fisotroana kafe ary trano fisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny vaovao.
Iray amin'ireo mahasarika indrindra ny kodiaran'ny Ferris, izay maharitra 35 minitra mandeha ary misy kabine 27 mampahazo aina. Amin'ny andro tsara dia afaka mahita ny Alpes ianao na mankafy ny filentehan'ny masoandro mahafinaritra, miaraka amin'ny fomba fijery grandioso an'i Munch mivelatra eo ambaniny (80 metatra) raha mijery ny lamasinina izay manana tsipika mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Munich (35 minitra).
Lapan'ny tanànan'i Munich – Sary © Elisabeth Lang
Na izany aza, raha mitady marika famantarana ao amin'ny Ostbahnhof, garan-dalamby Munich Atsinanana ianao, ary lalana mankany amin'ny kodiaran'ny Ferris, dia mitady very maina ianao. Tsy misy! Mijanona ho zava-miafina ny antony tian'ny tanànan'i Munich mitazona ny iray amin'ireo toerana mahasarika indrindra an'i Munich ho tsiambaratelo tsara indrindra ao an-tanàna.
Saingy eto no nampiana ny lanitra vaovao farany sy vaovao manaitra ny tany miaraka amin'ny fanokafana ny hotely avo indrindra ao Munich vao iray volana lasa izay, naorina tamin'ny silo ovy teo aloha. Io no hotely Aussie voalohany ao Munich ary tena manokatra maso.
Ny vaovao Adina Hotel Munich dia eo amin'ny rihana faha-9 hatramin'ny faha-25 ary manolotra fomba fijery mahafinaritra an'i Munich. Teny an-dalana ho any amin'ny fandraisana, ny ascenseur dia manome ny fomba fijery ny Sydney Opera House. Afaka mahatsapa ny fikitihana Aostraliana ianao. Mahagaga ny fomba fijery, ary mahavariana ny mijery ireo lamasinina mena kely tsy mitsahatra miala amin'ny Garan'i Ostbahnhof ary mahita ny Frauenkirche, ny tilikambo BMW ary ny tilikambo fahitalavitra any aoriana.
Ondry eo ambony tafo – Sary © Elisabeth Lang
Avy amin'ny trano fisakafoanana, ny vahiny dia afaka mijery ny manodidina ny eklektika eo akaikin'ny varavarana ary mijery ilay tranobe vao naorina eo ambany (7 rihana) izay ahitana ny ALM an-tanàn-dehibe (fitantanana ny tany fambolena) araka ny tokony ho izy eo an-tampon-trano. Tsy misy dobo filomanosana raitra, fa tena ondry ahitra am-pifaliana eny amin’ny bozaka maitso eny an-tampon-trano, fa ny akoho be atao kosa mihazakazaka ary afaka miverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’akohony.
Ity dia faritra tena eklektika mahafinaritra mendrika hojerena.